बिहीबार जन्मिने व्यक्तिको भाग्य कस्तो ? प्रेम विवाह की मागी बिवाह ? जान्नुहोस् - Nepal Insider
Home/समाचार/बिहीबार जन्मिने व्यक्तिको भाग्य कस्तो ? प्रेम विवाह की मागी बिवाह ? जान्नुहोस्
स्वागत नेपालको प्रश्नः फेसबुकेले निर्दोष भन्दैमा रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति हुन्छ ?
रवि लामिछानेका समर्थक भन्छन्ःहामी बन्द विरोधी हौं ,रविको समर्थनमा बन्द होइन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छाै
अर्घाखाँचीको सुपा खोलामा जिप दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु ५ घाइते..
जताततै बम विस्फोट भैरहेको बेला विप्लबलाई दिए मुकुन्देले कडा चेतावनी